Raisul wasaaraha dhowaan la magacaabay ee xukuumada Somalia Cumar C/rashiid Cali Sharmaarke ayaa lagu wadaa inuu maanta hortago xildhibaanada baarlamanka si uu codka kalsoonida u weydiisto.
Xildhibaan Sanyare oo ka mid ah xubnaha baarlamanka ayaa sheegay in kulanka maanta ajendihiisu yahay cod u qaadida kalsoonida raisul wasaaraha, isagoo xusay in la filayo cod aqlabiyad leh in lagu ansixiyo raisul wasaaraha cusub.
Amaanka xarunta baarlamanka Somalia ayaa si weyn loo xoojiyey saaka, waxaana la xiray dhamaan wadooyinka soo gala oo la dhigay ciidamo hubeysan oo dib u celinaya gaadiidka dadweynaha noocyadiisa kala duwan.
Ka hor inta aan codka kalsdoonida loo qaadin ayaa la filayaa in raisul wasaaraha cusub Cumar C/rashiid uu barnaamijka siyaasadeed ee xukuumadiisa uu ka hor jeediyo xildhibaanada.
Cumar C/rashiid ayaa haddii uu helo codka kalsoonida baarlamanka waxaa uu noqon doonaa raisul wasaarihii 3aad ee soo mara dowlada uu madaxweynaha ka yahay Xasan Shiikh oo talada dalka heysa in ka badan labo sano.